Gudoomiye la weeraray oo ka Hadlay Qarax lala Eegtay – Radio Daljir
Diseembar 20, 2015 4:03 b 0
Somalia, December 20, 2015-(Daljir)_ Guddoomiyaha Gobolka Gal-gaduud ee dowladda Soomaaliya, Xuseen Cali Weheliye [Cirfo] oo dhaawac fudud uu kasoo gaaray rasaas ay gaari uu watay ku fureen kooxo hubeysan, kaddib qaraxii ka dhacay waddada Maka Al-Mukarama ayaa sheegay inuu ka badbaaday isku-day dil oo lagu qaarijin lahaa.
Cirfo ayaa intaa raaciyay inay rag hubeysan oo saarraa gaari yar rasaas ku fureen baabuurkiisa oo halkaa marayay, isagoo sheegay inuu ka badbaaday weerarkaas lala damacsanaa, balse ay jiraan dad badan oo waxyeello ay kasoo gaartay qaraxii dhacay.
“Kooxo hubeysan ayaa gaari aan watay xabbad ku billaabay markii uu qaraxu ka dhacay waddada Maka Al-Mukarama kaddib, Alle waa iga badbaadiyay oo waxba nagama soo gaarin, balse ay jiraan dad badan oo waxyeello soo gaartay,” ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Galguduud.
Kama uusan hadlin guddoomiyuhu dhaawaca fudud ee soo gaaray, wuxuuna ku baaqay in hay’adaha amniga dowladda Soomaliya iyo shacabkuba ay iska kaashadaan sidii ammaanka caasimadda loo adkeyn lahaa.
Shan qof ayaa la xaqiijiyay iney ku geeriyootay qaxii shalay Toban kalena dhaawacyo kala duwan ayaa ka soo gaartay,kuwaasoo isugu jiray Askar iyo shacab ka dhawaa goobta ay wax ka dhaceen,wuxuuna sidoo kale burbur aad u xooggan soo gaaray dhismayaal ganacsi oo halkaasi ku yiillay.
Weerarkii duhurnimadii shalay ka dhacay waddada Maka Al-mukarrama ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa masuuliyaddiisa sheegtay Ururka Al-shabaab,mana jirto cid loo soo qabtay ,balse laamaha ammaanka ayaa sheegay inay ku raadjoogaan.